Mareykanka oo ciidamo u diraya Poland - BBC News Somali
Mareykanka oo ciidamo u diraya Poland
23 Abriil 2014
Image caption xarunta difaaca ee Mareykanka oo ciidan u direyso Yurub
Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in 600 oo askeri ay u direyso dalka Poland iyo dalalka dersika Ruushka, si ay taageero ugu muujiso isbaheysiga NATO ee gobolka.
Tallaabada ayaa imaaneyso kadib booqasho laba maalin oo Kiev uu ku joogay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Joe Biden, kaasoo xukumadda Moscow ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo xuduudda Ukraine.
Dowladda Mareykanka ayaa doodgureynta ciidamadan ee Poland iyo dalalka xuduud la leh Ruush-ka, ku sheegtay inay tahay tallaabo ay ku fulineyso go’aankeeda ah in masuuliyad ay ka sarantahay nabadda qaaradda Yurub.
Afhayeenka ciidamada Mareykanka, Admiral John Kirby, ayaa tilmaamay in ciidamadan ay maalinta arbacada ah ay gaaridoonaan dalalka loogu talagalay, wuxuuna sheegay inay ka qeybgali doonaan dhoolatus laba dhinac ah.
Admiral Kirby ayaa intaa ku daray in Mareykanka uu fulinayo waajibaadkiisa ku xusan farqada shanaad ee hishiika NATO, taasoo dhigeyso in la difaaco xubin kastoo ururka ka mid ah oo la weeraro.